Adobe wuxuu soo bandhigayaa Apple M1 Beta loogu talagalay Premiere Pro, Rush iyo Audition | Abuurista khadka tooska ah
Maanta Adobe wuxuu ku dhawaaqay helitaanka Adobe Premiere Pro, Premiere Rush iyo Audition loogu talagalay Nidaamka Apple M1. War kuxiran midkale oo aan dhawan kahelay tixraaca Processor-yadaha Windows ARM iyo processor-ka Apple ee Adobe Lightroom.
Taxanahan codsiyada kuwa nidaamyadu waxay u yimaadaan si ay uga faa'iideystaan ​​waxqabadka iyo waxtarka tamarta. Laba dhinac oo maanta ka muhiimsan kana mid ah Adobe oo si tartiib tartiib ah u kordhinaysa si ay u keento dhammaan barnaamijyadeeda 'Cloud Cloud'.
Marka Adobe ayaa leh loo xayaysiiyay barnaamijyadan fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'Cloud Cloud' Waxaa loogu talagalay inay ku qabtaan sida ugu fiican uguna fiicnaadaan waxtarka tamarta nidaamka Apple M1. Waxaa lafilayaa inta lagu gudajiro waxqabadka beta beta in loofiicnaan doono si looga faa iideysto.
Waxaa la filayaa in qeybta hore ee 2021 waa la heli karaa Adobe Premiere Pro, Premiere Rush, iyo Audition oo leh taageero wadaniyadeed oo buuxda oo loogu talagalay nidaamyada Apple M1.
La Adobe Premiere Pro beta waxaa ku jira astaamaha tafatirka asaasiga ah waxayna siisaa taageero aqlabiyad koodhadh sida H.264, HEVC, iyo ProRes. Dabcan, haddii aan isticmaalno beta waxaan kugula talineynaa inaad sameyso nuqul ka mid ah mashaariicda haddiiba ay dhacdo, maadaama khaladaad dhici karaan.
In beta ee Premiere Rush waxaan ka heli karnaa taageerada H.264, ku dar cinwaanno iyo maqal maktabadaha, waxayna ku siin doontaa taageero si loo abuuro mashaariic loona dhoofiyo. Xiritaanka, Audition waxay horey u soo bandhigtay guulo wax ku ool ah oo saameyn badan oo maqal ah, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo wanaajin ah sida waxqabadka waqtiga-dhabta ah ee tifaftiraha isdabajooga muuqaalka.
Sidii aan nidhi, noocyadii hore ee Adobe Premiere Pro, Premiere Rush, iyo Audition ee Apple M1 Systems Waxay imaan doonaan qeybta hore ee 2021, sidaa darteed in yar oo dulqaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Adobe Premiere Pro, Premiere Rush iyo Audition ayaa hadda loo heli karaa Apple M1 Systems ee beta